Somaliland News : Xabsiga Magaalada Boosaaso oo ay ka dhacdey fadeexadii Abu Ghuraib oo kale
Xabsiga Magaalada Boosaaso oo ay ka dhacdey fadeexadii Abu Ghuraib oo kale
Medeshi (Somali Page)
Maamul Goboleedka Bariga Soomaaliya ee Puntland ayaa beryahan wadey falgalo ka dhan ah Shacabka Ogadeniya ee ka soo barakacay xasuuqa ay Itoobiya ka wado Ogadeniya. Falgaladan oo maamulka Puntland ugu adeegayo Xukumada Itoobiya.
Faldambiyeedkii ugu dambeeyey ayaa dhacay bishan Oct 19, kadib markii 5 Wiil oo u dhashey Ogadeniya ay ka soo noqdeen wadanka Yeman ay Booliska Puntland xabsiga dhigeen. Wiilashan ayaa watey warqado ay soo siisay safaarada Soomaliya ee Yemen, waraaqadhaas oo la siiyo qofkii doonaya in uu dalkiisa ku noqdo.
Wiilashan ayaa mid kasta lagu xidhey qol gooni ah waxaana loo keenay sirdoonka Itoobiya, kuwaas oo inta dharka laga dhigey la mariyey ciqaabo kala duwan, isla markaana sawiro kala duwan laga qaadey iyaga oo qaawan si loo bahdilo.
Wararkii ugu dambeeyey ee hadana naga soo gaadhey magaalada Booosan ayaa sheegaya in mid ka mid ah Wiilahaash loo gudbiyey dhinaca Itoobiya, kuwii kalena ku sii daba jiraan.
Dhinaca kale, Maamulaha Gobolka Puntlad Faroole ayaa qudbad uu jeediyey bisha Oct 21 ku sheegay in aysan shacabka Ogadeniya xaq u lahayn Soomaalinimada.
Ma'aha marki ugu horeysay ee maamulka Puntland ku kaco fal ka dhan ah Shacabka Ogadeniya, talaabadan waxaa ka horeeyey dhacdooyin hore oo badan oo ay dad shacab ah ugu gacan geliyeen Xukumada Itoobiya. Dhacdooyinkaas waxaa ugu dambeysay mid ka dhacdey Magaalada Garoowe Oct 8, (halkan ka dhegays) halkaas oo sirdooka Itoobiya oo ay weheliyaan Ciimada Puntland ay habeen saq dhexe ah weerar ku soo qaadeen guri ay degenayeen dad ka soo jeeda Ogadeniya oo qaarkood safaro yihiin kuwana meesha degenaayeen. Sirdoonka Itoobiya ayaa qafaashey laba niin, labo kalena si xun u dhaawacey. Labada dhaawaca ah ayey mid ka mid ah inta ay 15 nabar ku oo uu gawrac ku jiro ku dhufteen ugana tageen meyd ahaan meel magaalada duleedkeeda ah.
Source: Ogaden Net